Cat pezzottaite anya Cat - raspberyl - utu beryl - cesium beryl - vidiyo
Pezzottaite nke Cat
Tags Cat anya, Pezzottaite
Zụrụ eke gemstones na ụlọ ahịa anyị
Pezzottaite Cat na-ere ahịa, na-ere ahịa n'aha aha raspberyl ma ọ bụ beri beri. Ọ bụ ụdị ịnweta ọhụrụ. Ndi International Mineralogical Association nabatara m nke mbụ na Septemba 2003. Pezzottaite bụ atụtu cesium nke beryl. Ihe mkpuchi nke cesium, nwekwara beryllium, lithium na aluminom. Na usoro kemịkalị Cs (Be2Li) Al2Si6O18. A kpọrọ ya onye ọkà mmụta ihe banyere ala Italy na onye na-azụ ala bụ Federico Pezzotta. Pezzottaite bu ụzọ chee na ọ bụ beryl na-acha ọbara ọbara. Ma obu ihe ohuru beryl ohuru: cesium beryl. Ma, n'adịghị ka beryl n'ezie, pezzottaite nwere lithium na kristal. Ọ dị na sistemụ kristal dị iche iche kama usoro sistemụ hexagonal.
Colours gụnyere shades nke utu uhie na-acha uhie uhie na pink. Natara site na miarolitic cavities na granitic pegmatite ubi nke Fianarantsoa n'ógbè, South Madagascar. Cristal pezzottaite dị ntakịrị karịa 7 cm / 2.8 na, na ha kasị ukwuu akụkụ na tabular ma ọ bụ na-ere na agwa. Ole na ole n'ime ha, ihe kachasị na-ejikọta ya na mkpụrụ osisi na-eto na mmiri. Ihe dịka 10 pasent nke ihe ndị ahụ siri ike ga-egosiputa mkparịta ụka mgbe a na-egbu maramara. Ihe kachasị mma pezzottaite dị n'okpuru otu carat (200 mg) dị arọ ma ọ dịkarịa karịa gafee mita abụọ / 400 mg.
Nchọpụta Cat na-ahụ anya Cat
Ewezụga 8 siri ike na Mohs ọnụ. Njirimara nke anụ ahụ na nke anya nke pezzottaite ntụgharị 3.10 ike ngwa ngwa, 1.601 na-akọwa ihe na 1.620. 0.008 birefringence ka 0.011 (adịghị mma na-adịghị mma) dị elu karịa ụdị beryl. Pezzottiate bụ ihe na-adịghị ahụkebe na mgbagwoju anya na mgbagwoju anya, na streaks na-acha ọcha. Dị ka beryl, ọ na-ezughị oke iji kpochapụ blọọtọ dị mma. Pleochroism bụ nke na-adaghị adaba, site na pink-oroma ma ọ bụ na-agbanye pink na-acha odo odo na-acha odo odo. Ụdị ihe dị iche iche nke Pezzottaite, dị ka ọhụụ ọhụụ, ọhụụ ọhụụ, spectroscope, nwere njiri na 485-500 nm. Na ụfọdụ ụdị na-egosiputa akara ike na 465 na 477 nm na egbe na-adịghị ike na 550 na 580 nm.
Ọtụtụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha nile, nke ego ndị Madagascan esitela kemgbe ahụ gwụrụ. A chọpụtala pezzottaite na ọ dịkarịa ala otu ebe ọzọ, Afghanistan: a na-eche na ihe a bụ nke mbụ bụ ceium-ọgaranya morganite / pink beryl. Dị ka morganite na bixbite, a kwenyere pezzottaite na ọ na-agba agba ya na radieshon-nke na-emepụta ebe a na-emepụta ihe ndị na-agụnye ndị mmadụ. Pezzottaite ga-agba ya ma ọ bụrụ na ọkụ na 450 Celsius C maka awa abụọ. Ma agba nwere ike weghachite ya na irradiation gamma.
N'ọmụmụ ihe, nyocha, nkwurịta okwu ma ọ bụ pusi anya, ọ bụ mmetụta ngosi nke anya na-ahụ anya na nkume ụfọdụ. Site na French "nyocha nke nkata", nke pụtara "anya nkịta", nkwurịta okwu na-esite ma ọ bụ site na nsị ụrọ nke ihe, dịka anya catmaline anya, ma ọ bụ site na fibrous inclusions ma ọ bụ cavities n'ime nkume, dị ka pusi anya chrysoberyl. Ihe ndị na-eme ka ndị mmadụ na-akparịta ụka bụ ihe dị mkpa. Ihe nchoputa a na-enyocha amaghi ihe omuma nke tubes ma o bu ihe eji eme ihe. Akwukwo a na-eme ka ha kwado kwekorita anya na anya nke anya. Ngwunye nke nkedo nke mkpa a bụ naanị otu n'ime akụrụngwa nkume atọ nke orthorhombic nke chrysoberyl, n'ihi nsụgharị na ntụziaka ahụ.
Madagascar na pezzottaite anya Cat